एम्स्टर्डम जलवायु परिवर्तनको बारेमा गम्भीर छ नेटवर्क मौसम विज्ञान
मौसम परिवर्तन र यसको प्रभावलाई शान्त पार्न समाधानहरूको बारेमा कुरा गर्नु पेरिस सम्झौताको बारेमा कुरा गर्ने पर्याय हो। डिसेम्बर २०१ in मा आयोजित जलवायु परिवर्तनको बिरूद्धको शिखर सम्मेलन ग्रहले गर्नु पर्ने जरुरीताको पहिचान गर्नका लागि एउटा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो १. 1,5 डिग्री सेल्सियस माथि ग्लोबल तापमानमा वृद्धिलाई कम र समेट्नुहोस्।
यो उद्देश्य महत्वाकांक्षी हो, यद्यपि देशहरूले गरेका कार्य र प्रतिबद्धताहरू त्यति महत्वाकांक्षी छैनन्। संयुक्त राष्ट्रका अनुसार हामीसँग रहेको तापमानमा वृद्धिको गतिक्रम आज यदि सबै कुरा यस्तै चलिरहन्छ भने यो 3,4 डिग्री सेल्सियस छ। र त्यो खातामा लिदैछ कि सबै देशहरूले पेरिसमा सहमति जनाएका उपायहरू पूर्णरूपमा लागू गर्दछन्।
1 तापमान कम गर्न कार्यहरू
2 एम्स्टर्डमले यसको गृहकार्य गर्दछ
तापमान कम गर्न कार्यहरू
यस कारणका लागि, नोभेम्बर २०१ 22 मा माराकेचमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पार्टीहरूको सम्मेलन (सीओपी २२) ले यस अपेक्षित परिवर्तनलाई प्रभावकारी कार्यहरूमा परिणत गर्न खोज्यो। यदि होईन भने, सम्भावित परिदृश्यलाई विश्व बैंकले अभूतपूर्व तातो तरंगहरू, उष्णकटिबंधीय आँधीबेहरी, खडेरी र भोकमरी, र इकोसिस्टमको बेपत्ता पारित समुद्री सतह इत्यादिको रूपमा वर्णन गरिसकेको छ।
यो स्पष्ट छ कि उद्देश्य र उपायहरू परिवर्तन हुनुपर्दछ वा कडा हुनुपर्दछ, हालका लागि ती पर्याप्त छैनन्। ग्लोबल वार्मिंग र इकोसिस्टम र जीवनमा सबै नकरात्मक प्रभावहरूको सामना गर्नुपर्दा हामी यो जान्दछौं, शहरहरूले एक प्रमुख भूमिका खेल्छन्। शहरहरूमा शहरीकरणको वर्तमान दर समयसँगै असुरक्षित छ। त्यसकारण परिवर्तन हाम्रो समयका चुनौतीहरूको जवाफ दिन असमानता, जलवायु परिवर्तन र यो असुरक्षित र टिकाऊ शहरी विकास जस्ता मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।
ती हाम्रो दैनिक र दैनिक क्रियाकलापहरू हुन् जस्तै गतिशीलता, उपभोक्ता उत्पादनहरू र खाद्यान्न, तताउने, शोषण वा जीवाश्म ईन्धनको परिवहन, आदि। यी सबै कुराले CO2 उत्सर्जनमा योगदान गर्दछ जसले जलवायु परिवर्तनको गतिलाई तीव्र गर्दछ। संयुक्त राष्ट्रका तथ्या data्कका अनुसार शहरहरूमा शहरी प्रदूषणले विश्वव्यापी रूपमा करीव 3,4. XNUMX. लाख समयपूर्व मृत्युमा योगदान पुर्‍याउँछ। यो किनभने वातावरणीय प्रदूषणले श्वसन र हृदय सम्बन्धी रोगहरूबाट पीडित हुने सम्भावना बढाउँदछ।
एम्स्टर्डमले यसको गृहकार्य गर्दछ
यो सबै माथि उल्लिखित छ कि एम्स्टर्डमले अधिक शहरी स्थिरताका लागि लक्षित उपायहरू कार्यान्वयन गर्न शुरू गरेको छ। प्रदूषण र मौसम परिवर्तनका मुद्दाहरूमा यसको एक ठूलो आकांक्षा यो हो कि यसको उद्देश्य २० by० सम्ममा सीओ २ उत्सर्जनबाट पूर्णतया स्वतन्त्र शहर हुनु हो।
यस स्थिरता प्राप्त गर्नका लागि गरिएका उपायहरू मध्ये:
"स्वच्छ हवा २०२2025" कार्यक्रमको उद्देश्य हो दिगो गतिशीलता जुन सार्वजनिक र विशेष गरी निजी दुवै यातायात संग सम्बन्धित CO2 उत्सर्जन हटाउँदछ। यो पनि शून्य उत्सर्जन मोडेल र इलेक्ट्रिक सवारी को संख्या मा वृद्धि द्वारा डिजल ईन्जिन बसहरु को प्रगतिशील प्रतिस्थापन को परिकल्पना गरिएको छ। व्यक्तिहरूको लागि समर्थन योजना र पेट्रोल र डिजेल सवारी साधनहरूको प्रतिबन्धको साथ विद्युतीय सवारी साधनहरूको निजी प्रतिस्थापनको लागि समर्थन पनि बढाइनेछ। सबैभन्दा प्रदूषित सवारी साधनहरूले देख्न सक्ने छन् कि उनीहरूको पहुँच बिभिन्न क्षेत्रमा सीमित छ जसरी म्याड्रिडले गरिरहेको छ मानुएला कार्मेनाको योजना.
कोइला र प्राकृतिक ग्यासको प्रयोगबाट नवीकरणीयहरूको प्रयोगमा संक्रमणका साथ स्वच्छ र दिगो ऊर्जाको प्रबर्धन गरिनेछ। यसैले, २०2050० मा शहर भर प्राकृतिक ग्यासको उपयोगलाई हटाउने उद्देश्यले यसलाई सीओ २ उत्सर्जनमुक्त क्षेत्र बनाउने हो। आगामी चार बर्षमा, यो अपेक्षित छ कि करीव १०,००० घरहरुलाई सफा उर्जासहितको नयाँ नेटवर्कमा समाहित गर्न सकिन्छ, जुन फोहोर जलाएर प्राप्त हुनेछ, बाँकी उर्जा उद्योग, जियोथर्मल उर्जा, हरित ग्यास (जुन कि जैविक पदार्थ छोड्नुहोस् जस्तै मल वा बोट मलबे), वा सौर प्यानल को उपयोग।
पर्यावरण जागरूकता र शिक्षा योजनाहरु। सहरी हावाको गुणस्तर सुधार गर्न यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। प्रोजेक्ट भनिन्छ TreeWifi जसमा छिमेकीहरूलाई निःशुल्क इन्टरनेटको सट्टामा सडकको स्वच्छ हावा कायम गर्न प्रेरित गर्न प्रयास गरिएको छ। ट्री वाइफाइ शहरको रूखहरूमा बर्डहाउस राख्दै सेन्सरको साथ वायुको गुणस्तर र वाइफाइ राउटर इन्टरनेट जडानको साथ मापन गर्दछ। यसैले, जबसम्म प्रदूषण र सामान्य वायु गुणस्तरको स्तर सिफारिस गरिएको सीमा भित्र रहन्छ, बर्डहाउसको छाना हरियो बग्नेछ र छिमेकीहरूले निःशुल्क वाइफाइ पाउनेछन्। अन्यथा, घरको छाना रातो उज्यालो हुनेछ र राउटरले इन्टरनेट जडान काट्छ।
तपाईमले देख्न सक्नुहुनेछ, एम्स्टर्डमले आफ्नो गृहकार्य राम्रो गर्दैछ र विश्वका बाँकी शहरहरूले पनि यो गर्नु पर्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » एम्स्टर्डम जलवायु परिवर्तनको बारेमा गम्भीर छ
वसन्त २०१ about को बारेमा जिज्ञासा